omaly tamin’ny 10 ora sy sasany atoandro. Vokatry ny fandehanana mafy no tsy nahafehezan'ny mpamily ilay fiara izay tapaka hisatra rahateo. Rehefa tonga nifanandrify teo amin'ny sampanana mankany amin'ny hôtel Paon d'Or ilay fiara dia nisongona môtô ary dia nirifatra tany amin'ny "trottoir". Nanitsaka mpandeha an-tongotra roa izy noho izany, araka ny fampitam-baovaon'ny kaompanian'ny Zandarimariam-pirenena Ambohidratrimo.
Nidina teny ifotony nizaha ny tranga ny Zandary ao amin'ny paositra Mandrosoa Ivato sy ny Dokotera lehiben'ny toeram-pitsaboana Talatamaty. Efa nalefa eny amin'ny fianakaviany Ambohibao ny razana. Ilay lehilahy tapa-dranjo kosa efa mahazo ny fitsaboana sahaza azy eo amin'ny CSB Talatamaty. Ny mpamily moa voatana ary atao famotorana amin'ny borigadin'ny zandary Talatamaty.
Nisesy ny loza tamin’iny lalan’Ivato iny tato ho ato. Anisan’ny mampamiromiro ireo mponina ny firimorimon’ny fiara kanefa lalan-telo fotsiny no mifanena amin’iny fa ao ireo mizotra roa andaniny avy avy aty Talatamaty sy avy any Ivato. Mitaky fandokoana fanasarahana mazava ireo lalana ireo, indrindra amin’ireo fiolahana tsy ifankatazamana.